नेपाली कांग्रेस मा प्रवेश गर्ने यस्तो छ रमेश खरेलको तयारी::– Nepal's Digital Paper
१गोरेले लिए सुन तस्करीमा संलग्न अन्य व्यक्तिको नाम ! हेर्नुहोस अरु को को हुन् ?
२पक्राउ परे लगत्तै यस्तो भने गोरेले, गृह मन्त्रालय देखि विमानस्थल सम्म मच्चियो हंगामा
३पोर्न फिल्म हेर्दाहेर्दै यी युुवकले काटे आफ्नै यौनांग
४भाइरल ज्वरोको अनुगमन गर्न जाजरकोट पुगेका मन्त्रीको बिल १८ लाख !
५अब म प्रधानमन्त्री होइन प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बन्छु : प्रचण्ड
६नीति तथा कार्यक्रमबारे यस्तो छ बाबुराम र देउवाको प्रतिक्रिया
७मलेसियामा जाने कामदारको भिसा सोमबारदेखि बन्द
८संविधान संशोधनमा गोप्य सहमति भएको प्रचण्डको खुलासा
९दश वर्ष भित्रै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सम्मानित बनाइने
१०सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई स्वरोजगार लाई
११मन्त्रिपरिषद् बैठकले अमेरिका जान रोके पछि यस्तो भने मुख्यमन्त्री राउतले
१२खनाल र रावलले भने अहिलेको निर्णय कुनै हालतमा स्वीकार हुदैन !
१३७ सांसदले रातो पासपोर्टका लागि सिफारिस पाएनन्
१४फेरि अर्को सकसमा परे केपी–प्रचण्ड
१५यस्ता छन् सरकारका नीति तथा कार्यक्रम , आज दिउँसो ४ः बजे राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्दै
नेपाली कांग्रेस मा प्रवेश गर्ने यस्तो छ रमेश खरेलको तयारी
प्रकाशित मिति :बिहिबार, चैत्र २९, २०७४ Thursday, April 12th, 2018
काठमाडौं – गृहमन्त्रालयले डिआइजी रमेश खरेलको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेका हुन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार डिआइजी खरेलले घरायसी कारणले राजीनामा दिएका हुन्।
गृहमन्त्रालयले उनको राजीनामा स्वीकृत भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई जानकारी गराएको छ। मंगलबार डिआइजी सर्वेन्द्र खनाललाई प्रहरी प्रमुखमा नियुक्ति गरेलगत्तै डिआइजी रमेश खरेलले बुधबार राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। आजै गृहमन्त्रालयले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेको हो।
खरेल २०४५ सालमा भलिबल खेलाडीको रूपमा नेपाल प्रहरीमा भर्ना भएका थिए। खरेल नवनियुक्त आइजी सर्वेन्द्र खनाल र डिआइजी पुष्कर कार्कीसँगै २०४६ साल माघ २९ गते सगै निरीक्षकको परीक्षा उत्तिर्ण गरी प्रहरी निरिक्षक भएका थिए।
खरेलको राजिनामालाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । खरेलले पूर्व डिआईजी नवराज सिलवालकै पथ पछ्याउने स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार खरेल सम्भवतः धेरै छिटो राजनीतिमा आउने तयारीमा जुटेका छन् ।
अहिले खुलेर केही नभने पनि खरेलको लक्ष्य राजनीतिमा जाने नै रहेको कतिपयको विश्लेषण छ । प्रहरी प्रमुख बन्नका लागि महत्वाकांक्षा पालेर बसेका खरेलले उक्त लक्ष्य पूरा नभएपछि राजिनामा दिनुलाई सामान्य मान्न पनि सकिदैन ।
विगतमा राजनीतिज्ञहरुविरुद्ध दिएको कडा अभिव्यक्तिकै कारण अहिले उनी पछाडि परेको कतिपको बुझाई छ । यद्यपी प्रहरी प्रमुख बनाइएको खनाललाई अयोग्य हुँदाहुँदै अगाडि सारिएको भने होइन ।
त्यसैले हतासमा राजिनामा दिन नहुने सल्लाह खरेललाई धेरैले दिएका थिए । तर उनले राजिनामा दिइछाडे । त्यसैले पनि उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन लागेको आशंका बढेको हो ।
हक्की र मनमा लागेका कुरा बोलिहाल्ने स्वभावका खरेल अबको खास बाटो के हो भन्ने कुरामा विभिन्न प्रकारका अनुमान हुनु स्वभाविक नै हो । तर यसअघि बरियाता मिचेर आफूलाई पछाडि पारिएको झोकमा एमालेमा प्रवेश गरेर सासंद बनेका पूर्व डिआजी नवराज सिलवालको सिको खरेलले नगर्लान भन्न सकिदैन ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग ओलीको नयाँ प्रस्ताव, यस्तो छ निर्मल निवासमा भेट्ने तयारी
ओली र प्रचण्डले धोका दिएको भन्दै नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा जनार्दन शर्मा
सुन काण्डका ‘ठूला अभियुक्त’सँग एमाले नेता वामदेव र पौडेलसँग गोप्य भेटवार्ता
फेसबुकमा मोदीको विरोध गर्ने दुई सय जना पक्राउ
यिनै हुन परि तामाङको पोर्न भिडियो लिक गरिदिने प्रेमी
प्रहरी जवानको बयान : सुन आउने बेला डिआइजी र एसएसपी सा’ब कुरेर बस्नुहुन्थ्यो